(Nature)ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မြန်မာပြည်၏တိုးတက်မှုအကြောင်း 9July2011 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » (Nature)ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မြန်မာပြည်၏တိုးတက်မှုအကြောင်း 9July2011
Posted by nature on Jul 9, 2011 in Cultures | 11 comments
အသေဖြောင့်သူ post မှာ သူကြီးရဲ့ commet ကိုရှင်းရမှာရှည်လို့post တင်လိုက်တာပါ၊ draft ထဲမှာကြာပြီဖြစ်လို့ မတင်ဘူးလို့ စဉ်းစားပေမဲ့ ဖျက်လို့ကလည်း မရတာနဲ့ မထူးဘူဆိုပြီး ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ်။
(ကမ္ဘာအလယ်မှာ နိုင်ငံရေး. စီးပွားရေး. ယဉ်ကျေးမှု.. တွေကျဆင်းနေတဲ့ ..ဗုဒ္ဓရဲ့..တရားတွေကို အခြေခံပြီး မြန်မာပြည်က လူတွေကသာ.. အမှန်တွေချည်းသိနားလည်သလို ရေးနေပြောနေကြတာတွေ့ရတော့.. စိတ်တော်တော်လေးမိတာပဲ..။)
ကျနော့်အမြင် ကတော့ ကမ္ဘာ အလယ်မှာ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး ကျဆင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု ကျဆင်းတယ် ဆိုတာကတော့ ခုခေတ် လူငယ်တွေဟာ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်တဲ့ အနန္တော အနန္တ ၅ပါး ကို ရိုသေလေးစားမှု နည်းပါးလာခြင်း လူကြီးမိဘတွေကို ရိုသေရကောင်းမှန်း မသိပဲ တခုခုမေးမိရင် ဒါလေးတောင် မသိဘူလားဆိုပြီး အထင်သေးချင်ပါတယ်။ ဘုရားကလည်း ကောသလအိမ်မက် ၁၆ချက်မှာ နွားကလေးနို့ နွားကြီးစို့တဲ့ ခေတ် ရောက်လာဦးမယ်လို့ ဟောထားပါတယ်။
….တော်တော်များများ..ကျဆင်းနေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်ကို အခြေခံပြီး….
တိုင်းပြည် ကျဆင်းနေရတာ ဗုဒဘာသာ အတွေးအခေါ်ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ သူကြီးက ဗုဒဘာသာ အတွေးအခေါ်ကို အခြေခံလို့ တိုင်းပြည် ကျဆင်းနေရတာ လို့ ဆိုတာပါလား။ ကောင်းပြီ။ ဒါဆိုရင် ဘုရားက ဟောခဲ့တယ်။ ကိုယ်ခြင်းစာတရား ထားဖို့ ၊ ၅ပါးသီလကို ပုထုဇဉ် တိုင်း ခါးဝတ်ပုဆိုးလို (မဝတ်ရင် အရှက်ရစေတယ်လို့) မြဲကြပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်သားတွေ ဘယ်နှစ်ယောက် ၅ပါး သီလမြဲပါသလဲ။ ကျနော်လည်း မမြဲပါ။ လောကပါလ တရားတွေကို ကျင့်သုံးပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက် ကျင့်သုံးပါသလဲ။ ရွှေတိဂုံဘုရား တွေ အလှုတွေမှာ ဖိနပ်ခိုးတာ သောင်းကျန်းတာတွေ အားလုံး အသိပါ။ ဒါတွေဟာ ဗုဒဘာသာကို ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်နေတာပါဆိုတာ သူကြီး ငြင်းမလား။ ဘုရားဟောတရားတွေကို ဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ အတွက် ဘုရားဟောတရားတွေကို ဗုဒဘာသာ အတွေးအခေါ်တွေကို အခြေခံတယ်ဆိုတာကတော့ မှားပါတယ်။
ဗုဒရဲ့တရားတော် တွေဟာ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ၊ အကြောင်းတရားနဲ့ ကင်းသော အကျိုးတရား မရှိဘူး ဆိုတာ ဟောထားပါတယ်။ ဘုရားက ဟောခဲ့ပါတယ်၊ ခိုးမှုတွေမကျူးလွန်ကြနဲ့။ ခိုးမှူတွေကျူးလွန်ရင် ကိုယ်ရဲ့စီးပွါးဥစ္စာတွေလည်း ပျက်စီးတတ်တယ်လို့ ဟောခဲ့ပါတယ်။ ခုဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတာလည်း ဒီသဘောနဲ့ အကိုက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ ဒီတချက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်း တရား ပေါင်းစုံမှ အကျိုးတရားတခုရတာပါ။
ကျနော့်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိတာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ လူဖြစ်ပြီး ဗုဒဘာသာဝင် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာထက် ဗုဒဘာသာ အခြေခံလေးတွေကို သိရှိရတာဟာ ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်တဲ့ အဖိုးတန် ရတနာတခုပါပဲ။ဗုဒရဲ့ တရားတော်တွေကို အမှန်အတိုင်း လေးနက်စွာ သိတဲ့သူတွေဟာ တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်တဲ့ ရတနာမြေပုံ တခုကိုရထားသလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သိရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ လိုက်နာကျင့်သုံးရမှ အကျိုးတရားတွေ ရမှာပါ။
လူဆိုတာ တနေ့သေရမှာပါ။ ကိုယ်သေသွားတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ဥစ္စာ ရွှေငွေ တွေကိုထားသွား မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဥစ္စာရွှေ ငွေတွေကို နောင်ဘဝ ယူသွားနည်း ၊ နောင်ဘဝမှာ ကိုယ်ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ပြည်လည်တွေ့ဆုံနည်း တွေဟာလည်း တရားတော်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းကိုသိတာသိပြီး ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ မလုပ်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီဘဝမှာ ဘယ်လောက်ပင်ချမ်းသာသော်လည်း နောင်ဘဝအတွက် သံသရာအတွက် ရင်လေးစရာပါ။
ဗုဒရဲ့တရားတော်တွေဟာ ဗုဒဘာသာဝင်တွေ အတွက်သာ ဟောခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါ တွေ အားလုံး အတွက်ပါ။ ခိုးမှုတခု ကျူးလွန်ရင် ဗုဒဘာသာဝင်ဖြစ်လို့ သက်သာစေလို့မရှိပါ။ မည်သူမဆို မည်သည့်ဘာသာဝင်မဆို ခိုးမှု ဆိုတဲ့ အကုသိုလ် အကြောင်းကိုလုပ်ရင် ဥစ္စာစီးပွား ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့ အကုသိုလ်အကျိုးကို တချိန်ချိန်မှာ မုချကြုံတွေ့ရမှာပါ။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ မြန်မာပြည်မတိုးတက်တာ ဗုဒဘာသာရဲ့ တရားသဘောတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးမှုအားနည်းတာလည်း တချက်ပါနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတွေရဲ့ စီးပွားရေးအမြင် အားနည်းခြင်း ပြည်သူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တာဝန်ကြေမှု အားနည်းခြင်းတွေကြောင့်လည်းပါနိုင်ပါတယ်။
တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ပြောချင်ပေမဲ့ ထောက်မပြနိုင်သေးတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ပါသွားတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်များမှာ မို့.. တပွဲတလမ်း အကဲစမ်းဖို့ အချိန်သိပ်မပေးနိုင်သေးဘူး။ အဲဒီ အတွက် နည်းနည်း ငြိမ်ငြိမ်နေနေပါတယ်။
အမြဲတမ်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဘယ်အရာကိုမှ အစွန်းလွတ်အောင် လေ့လာ သင်ယူသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးတယ်ဆိုရာမှာ.. ရိုးသားရပါတယ်..။ ကိုယ်လိုရာဖက်ကို ဖြတ်ပြော..ဆွဲပြော.. လိုချင်တာလေးပဲဖြုတ်ပြောတာထက်.. အချက်အလက်လိုက်ရတာပါပဲ..။
ဘာသာရေးဆို.. ပိုပြီးတော့ သိသာတယ်.. အချက်အလက်၊ ကျမ်းကိုး လိုက်ရတယ်..။ ကိုးကားတာတွေရဲ့ တိကျခိုင်မာမှု အထူးသတိပြုရတယ်..။ လူအများက အတည်ပြုထောက်ခံထားတာတွေကို … အထောက်အထားယူရတယ်..။
အပေါ်က.. ကိုရင်Nature က သူကြိးရဲ့စာဆိုပြီး ဖြတ်ပြီးကိုးကား.. ပြီးမှ.. ပြန်သုံးသပ်ပြတာဟာ… အပြည့်အစုံညွှန်းဆိုပြန်မပြတာဟာ.. ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှု အနုပညာမမြောက်ဘူးဖို့ပဲ ပြောချင်ပါတော့တယ်..။
အင်း.. ကျုပ်ကပဲ..မြန်မာပြည်မတိုးတက်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်လို့…. .ပြောနေသလိုလို….။
ဒီရွာထဲမှာပဲ.. အနန္တော အနန္တ ၅ပါးဆိုတာ.. မိဘနဲ့ဆရာကို နောက်မှထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့.. မြန်မာပြည်တိုးတက်မှုနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်သုံးသပ်ပြထားတဲ့ ပို့စ်တချိုုု ့.. ဒေါက်တာဘွဲ့ရ..ဆရာတော်တပါးတင်ဖူးတယ်..။ အဲဒါရောဖတ်ဖူးရဲ့လားမသိ..။
အဲဒီတေ့ာပစ် ..ပို့စ်တွေ..(တကယ်စိတ်ဝင်စားရင်)အစအဆုံးပြန်ဖတ်ဖို့..ညွှန်းပါတယ်..။ အောက်ကလင့်မှာတော့အသေဖြောင့်သူ postကိုဖတ် ကြည့်ပါ..။
ကျုပ်တင်ခဲ့တဲ့.. ကိုရင်Nature ကိုးကားတဲ့.. မန်းတာတာတခု..အောက်မှာအပြည့်အစုံပြန်ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်….( ဒီထဲမှာ ပညာရှင်ဆန်စွာဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်.. အဲဒီမန်းတာတခုထဲမဟုတ်ပဲ.. အဲဒီပို့စ်အကုန်တခေါက်သေချာပြန်ဖတ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါကြောင်း..)
ဒီခေတ်ကြီးမှာ..အချက်အလက်ကို မလိုက်ပဲ. ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့…စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းသာ လုပ်နေရင်တော့.. နှလုံးသားကပိတ်မိနေမှာပဲ..။
.. အိနိ္ဒယကနေ.. အဘိဓမ္မာအထူးပြုနဲ့.. ဒေါက်တာဘွဲ ့ယူထားသူရှိတယ်.။ ဘာသာရေး၊ ဖီလိုဆိုဖီနဲ့..ဒေါက်တာဘွဲ့ရထားသူတွေရှိတယ်..။ အချက်အလက်တွေပဲလိုက်တဲ့.. သမိုင်းပညာရှင်တွေရှိတယ်..။
သူတို့ကို .. မြန်မာတွေဘာတွေဖြစ်နေသလည်း.. ချည်းကပ်မေးသင့်တယ်..။
မှတ်သားစရာတခုက… သံဃာယနာတင်ထားတဲ့.. ပိဋိကတ် သုံးပုံဆိုတာက .. ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကပဲလက်ခံတာ…။
ဗုဒ္ဓက ..အိနိ္ဒယနဲ့ နီပေါမှာ ပွင့်ခဲ့တာ..။
မြန်မာတွေဟာ.. ဗုဒ္ဓတရားတွေကို သေသေချာချာလေ့လာချင်ရင်.. အိနိ္ဒယပြန်သွားရမှာပဲ..။
လူသန်း၅ဝတောင်မပြည့်တဲ့.. ကမ္ဘာအလယ်မှာ နိုင်ငံရေး. စီးပွားရေး. ယဉ်ကျေးမှု.. တော်တော်များများ..ကျဆင်းနေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်ကို အခြေခံပြီး ..ဗုဒ္ဓရဲ့..တရားတွေကို မြန်မာပြည်က လူတွေကသာ.. အမှန်တွေချည်းသိနားလည်သလို ရေးနေပြောနေကြတာတွေ့ရတော့.. စိတ်တော်တော်လေးမိတာပဲ..။
ကမ္ဘာ့လူဥိးရေသန်း၆၅၀ဝကျော်ရယ်..။ ဗုဒ္ဓပွင့်ချိန်ထက် နှစ်အများကြိးပိုစောတဲ့..ယဉ်ကျေးမှု လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရယ်.. ။ အတွေးအခေါ်တွေမျိုးစုံ ထွက်ခဲ့..ထွက်နေ..ထွက်လာဆဲ လူသားတွေရယ်ကို တော်တော်လျှော့တွက်လွန်းရာကျနေတယ်..။
တတိယသံဃာယနာမှာ တင်ခဲ့တာသူတွေက ..ရဟန္တာတွေလို ့.. သူတို့ကပဲပြောတာပါပဲ..။ သူတို့ဆိုတာ…..ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူနည်းစုကပါ..။
ဗုဒ္ဓရဲ့တရားမှာ ..မှန်မမှန်တိုက်စစ်လို့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေရှိတယ်..။
တခုနဲ့တခု.. အကျိုးအကြောင်း အပြန်အလှန်မချေဖျက်ရဘူး..။
ဆိုတော့.. ပိဋိကတ်သုံးပုံထဲ..ရှေ ့နောက်မညီဖြစ်နေတာ အများကြိးပဲ..ကိန်းဂဏန်းတွေပါလာရင် ပိုသိသာတာပဲ..။
ဒီခေတ်လိုလူတိုင်းလိုလို ဂဏန်းသချင်္ာနားလည်..။ လိုချင်တာကို အင်တာနက်ကနေ.. ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်တွေထဲမွှေလို့ရတဲ့ခေတ်မှာ… အဖြေမှန်ရှာဖို့..အင်မတန်လွယ်တယ်..။ ဟုတ်မဟုတ်လည်းချက်ချင်းကို သိသာတယ်..။
Abhidhamma Pitaka Origins
Scholars, however, generally date the Abhidhamma works to originating some time around the third century BCE, 100 to 200 years after the death of the Buddha. Therefore the seven Abhidhamma works are generally claimed by scholars not to represent the words of the Buddha himself, but those of disciples and scholars. Dr Rupert Gethin however said that important elements of abhidhamma methodology probably go back to the Buddha’s lifetime. A. K. Warder and Dr Peter Harvey both suggested early dates for the matikas on which most of the Abidhamma books are based. Abhidhamma started out as elaboration of the suttas,[dubious – discuss] but later developed independent doctrines.
As the last major division of the canon, the Abhidhamma Pitaka has hadacheckered history. It was not accepted as canonical by the Mahasanghika school[dubious – discuss] and several other schools[dubious – discuss]. Another school included most of the Khuddaka Nikaya within the Abhidhamma Pitaka. Also, the Pali version of the Abhidhamma isastrictly Theravada collection, and has little in common with the Abhidhamma works recognized by other Buddhist schools. The various Abhidhamma philosophies of the various early schools have no agreement on doctrine and belong to the period of ‘Divided Buddhism’ (as opposed to Undivided Buddhism). The earliest texts of the Pali Canon have no mention of (the texts of) the Abhidhamma Pitaka. The Abhidhamma is also not mentioned in some reports of the First Buddhist Council, which do mention the existence of the texts of the Vinaya and either the five Nikayas or the four Agamas. Other accounts do include the Abhidhamma.
ဒေါက်တာဘွဲ့မကလို့ ပိဋကတ်သုံးပုံ အာဂုံဆောင်လည်း ကြည်ညိုသည်ကလွဲပြီး ထူးထူးခြားခြား အားကိုး၍မရပါ။ အဘိညာဉ်တန်ခိုးရ၍လည်း လောကီအကျိုး မျှော်ကိုးဆည်းကပ်သည်မှလွဲ၍ ထွေထွေထူးထူး အားမကိုးနိုင်ပါ။
ဓမ္မကို ကျင့်ကြံအားထုတ် ပေါက်မြောက်သူသာလျှင် အားကိုးထိုက်သူ မည်ပါ၏။
1. I amaBuddhist (devoted).
2. I organized some Wi Pat Tha Nar Meditation Sessions ( ဝိပဿနာစခန်း ),
when I was in Myanmar.
( those Meditation Sessions were done by strictly following of အဘိဓမ္မာ ပိဋိကတ် )
3. So far, I still trust the methods in “အဘိဓမ္မာ ပိဋိကတ်” are true.
In fact, I really want to be proud for our (Buddhist) religion. Really.
But, fact is fact & you must be logical & rational.
The following facts are correct & we have to admit,
(1) အဘိဓမ္မာ ပိဋိကတ် က.. ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောမဟုတ်ပါဘူး..။
(2) ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလည်း … မဟုတ်ပါဘူး..။
(3) ပဌမသံဂါယနာ၊ ဒုတိယသံဂါယနာတွင် မပါဝင်ပါ..။
(4) တတိယသံဂါယနာတွင်မှ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿထေရ် ဦးဆောင်၍ ပကရဏခုနစ်ကျမ်းအဖြစ် ပါဝင်ပါသည်..။
If you ask to “ပညာတတ်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ”, they will answer the same.
“တတိယသံဃာယနာမှာ တင်ခဲ့သူတွေက ..ရဟန္တာတွေ”
I want to know, who said & how do they know ???
We need proofs/evidences instead of emotional saying & myths.
I do not say the methods/ways in “အဘိဓမ္မာ ပိဋိကတ်” are wrong &
I still trust the methods/ways in “အဘိဓမ္မာ ပိဋိကတ်” are true.
ဘာပဲပြောပြော ဒီပိုစ့်ကို ထောက်ခံသဘောကျမိတာ အမှန်ပါပဲ။
မြန်မာပြည်မတိုးတက်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့အညီ
မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)လည်းပြောပါတယ်…မတိုးတက်ရခြင်း အချက်(၁၁)ချက် (၁၁ချက်လို့ ထင်တာပဲ၊ သိပ်မမှတ်မိဘူး) ရှိတယ်တဲ့…ဖတ်ဖူးတယ်
Nature က ကျနော့်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိတာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ လူဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာထက် ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံလေးတွေကို သိရှိရတာဟာ ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်တဲ့ အဖိုးတန် ရတနာတခုပါပဲ လို့ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘကမွေးလို့ လူဖြစ်လာတာဆိုတော့ ဒီစကားပဲပြောမှာပေါ့။ ခရစ်ယန်မိဘက မွေးရင် ခရစ်ယန်ဘာသာဝင် ဖြစ်ရတာ ဘယ်အရာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူးလို့ လုပ်ဦးမှာပဲ။
ဒီစကားတွေက ပညာမပါပါဘူးဗျာ။ ဗုဒ္ဓတကယ်ဟောထားတဲ့ တရားသာ ယနေ့ ထွန်းကားနေရင် လိုက်နာနေကြရင် တိုင်းပြည်ရော၊ လူမျိုးပါ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားရော၊ အသိပညာတွေပါ တိုးတက်လာကြမှာပါ။
အခုမတိုးတက်တာဟာ ဗုဒ္ဓတကယ်ဟောထားတဲ့ အရိယသစ္စာတရားတွေ သိမ်မြုတ်နေပြီး ပရတ္တသစ္စာတရားတွေခေတ်စားနေလို့ပဲ။ ပရမတ်တရားတွေကြောင့် လူတွေက တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်နေကြလို့ မတိုးတက်တာပဲ။
realmean ရေ၊ ရေးကတည်း က ကျနော့်အမြင်ကို ရေးသားခြင်း ဖြစ်လို့ ကျနော့်အမြင်ကို realmean အနေနဲ့ ပြောင်းနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ ကျနော့် အမြင်ကိုလွတ်လပ်စွာရေးသားခြင်း ဖြစ်ပြီး real mean ကို အတင်းဇွတ်ယူရမယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ realmean ပြောနေတာကတော့ realmean အမြင်လို့ယူဆပါတယ်။
အောက်ကစာက မိုးမခကနေကူးထားတာကို .. အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပြီးတင်ခိုင်းသူရှိတာမို ့တင်ပေးတာပါနော..။
စာပါအကြောင်းအရာတွေက… မိမိတို့နှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း…။ မိမိတို့လည်းမသိကြောင်း..။
သံဃမဟာနာယက ဆိုတာ ဘာလဲ
ဇူလိုုင် ၇၊ ၂၀၁၁
အခုုတလောအချိန်မှာ တိုုက်တိုုက်ဆိုုင်ဆိုုင်ပဲ မြန်မာပြည် စစ်အာဏာပိုုင်တွေရဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အသုံးချခံဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကြီးအကြောင်း မေးကြ ပြောကြတာတွေကိုု စုုစည်းပြီး တင်ပြပေးချင်လိုု့ ဒီစာကိုု ရေးလိုုက်ပါတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ (၄) လပတ် အစည်းအဝေးတခုမှာ အချို့ရဟန်း သာမဏေများသည် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်၏ ကြီးကြပ်မှုကို မခံယူသည့် တရားမဝင် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေသည်လို့ လျောက်ထားဘူးတယ်လိုု့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။
သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ကြီးကို မဆလ တပါတီအာဏာရှင် ဦးနေဝင်းရဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ ၁၃၄၂ခုနှစ် နယုန်လ ( ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ် မေလ) မှာဂိုဏ်ပေါင်းစုံက သံဃာတော် (၁၂၀၀) ကိုပင့်ဖိတ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာပါသာဏလှိုင်ဂူကြီးအတွင်းမှာ စတင်ဖွဲ ့စည်းခဲ့တာပါ။
သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ် ၁၂၀ဝ ထဲမှ နိုင်ငံတော်ဗဟို သံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော် အပါး (၃၀၀) ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ သံဃမဟာနာယက ဆရာတော် (၃၃) ပါး (နောက်ပိုင်း (၄၇) ပါး) ကို ထပ်မံရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို ့မှာ ရုံးထိုင်စေခဲ့တာပါ။ အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ချက်ကတော့ သာသနာတော်သန့်ရှင်းတည်တံ့ ပြန်ပွားရေး ဆောင်ရွက်ဘို ့ပါ။
သံဃနာယကအဖွဲ ့စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ထင်ရှားတဲ့ မန္တလေးက စာသင်တိုက်ကြီးအချို့က ဆရာတော်ကြီးတွေက သဘောမကျခဲ့တာ အမှန်ပါ။ သံဃနာယက ဖွဲ့စည်းပြီးရင် စစ်အစိုးရက သံဃနာယကအဖွဲ့ကို အသုံးချပြီး သံဃာတော်တွေကိုဖိနှိပ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ မြင်တော်မူပါတယ်။ သာသနာရေးဌာနကအကောင်ကြီးကြီးတွေကိုယ်တိုင် ဆရာတော်ကြီးတွေထံ ချဉ်းကပ်ပြီး သံဃနာယကအဖွဲ့အစည်းထဲဝင်ဖိုု့ စည်းရုံးဖူးပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေက လက်မခံဘဲ သံဃနာယကအဖွဲ့နဲ့ ကင်းကင်းနေပြီး စာသင်စာချအလုပ်တွေကိုပဲ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကို နှစ်စဉ်ဆက်ကပ်နေကြ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့တော်နဲ့ အဘိဓဇဘွဲ့တော် ရနိုင်တဲ့အရည်အချင်းတွေရှိပေမယ့် မပေးပဲ အာဏာပိုင်တွေက ချောင်ထိုးထားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ အာဏာရှင်တွေနဲ ့မပတ်သက်ချင်လို ့ဘွဲ့တံဆိပ် မဆက်ကပ်လေကြိုက်လေပါ။
ခုဆိုရင် သံဃနာယအဖွဲ့ဖွဲ့တာ (၃၂) နှစ်ရှိပါပြီ။ (၃၂)တာ ကာလအတွင်း ဘာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲ။ အကြမ်းဖျဉ်း ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်။
(က) ဓမ္မဝါဒ အဓမ္မဝါဒဆိုင်ရာအဓိကရုဏ်းများ
နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓသာသာသနာတော်အတွင်း ဓမ္မ အဓမ္မ ငြင်းခုံနေတဲ့ အဓိကရုဏ်း (၇) မျိုးကို ဖြေရှင်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
(၇) ဦးမာလာဝါဒ(ရေတာရှည်) စတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ဝါဒတွေကို ဓမ္ဓ၊ အဓမ္ဓ စိစစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ တွေ့ ရပါတယ်။ သာသနာတော်မှာ သို့လော သို့လော ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝါဒတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းပေးတဲ့အတွက် အထိုက်အလျောက် အဓမ္မဝါဒတွေ ငြိမ်သွားတဲ့အတွက် သာသနာတော်အတွက် အကျိုးရှိခဲ့တာအမှန်ပါ။
ရဟန်းတော်များနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဝိနည်းဆိုင်ရာအဓိကရုဏ်းတွေ ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုများနဲ့ ပက်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေကို ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ် ဗဟိုသံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်က စီမံဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်၊။
အဲဒီလိုစီစဉ်ဆုံးဖြတ်ရာမှာ လက်မှတ်အတုတွေသုံးပြီး မမှန်မကန်ဘက်လိုက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုတွေ (ပြည်- ကျောင်းအမှု) လာဘ်စားမှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် သံဃမဟာနာကအဖွဲ့ အတွင်းမှာ သံသယတွေ အသံထွက်ခဲ့သလို လူအများရဲ့ ကဲ့ရဲ ့မှု၊ အထင်အမြင်သေးခံရမှုတွေ ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အဆိုးဆုံး နာမည်အပျက်ဆုံး အမှုကတော့ ကောလင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုအဓိကရုဏ်းမှာ သံဃနာယကအဖွဲ့ ရဲ့ လာဘ်စားမှုတွေ ပြည်သူကြားမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းကွန်း တိပိဋကဓရဆရာတော်ကြီး ဦးဝိစတ္တာဘိဝံသကတောင် “ဒါလား … သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ့” လို့ ရှုတ်ချပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
(၁) ၁၉၈၈ခုနှစ်မှာ အများသိကြတဲ့အတိုင်း ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ လူထုလှုပ်ရှားမှု အရေးအခင်းမှာ ငယ်ရွယ်တက်ကြွတဲ့ ရဟန်းငယ်များလည်း လူထုနဲ့အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ အရေးအခင်းကာလမှာ သံဃာတော်တွေဟာ ပြည်သူလူထုတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖိုု့နဲ့ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးအတွက် တဘက်တလမ်းက ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အရေးအခင်းဖြစ်နေချိန်မှာ ကမ်းနားလမ်း၊ ကုန်သွယ်ရေးရုံးပေါ်က စစ်သားတွေက ဆန္ဒပြလူအုပ်ထဲကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ဖိုု့ ကြိုးစားပါတယ်။ ရန်စ ဖိုု့ လုုပ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေ ဒေါသထွက်ပြီး ရုံးကို ဝိုင်းပါတယ်။ ဆန္ဒပြနေတဲ့လူအုပ်က များနေတဲ့အတွက် စစ်သားတွေ ပြေးပေါက်မရှိ ပိတ်မိနေတာပါ။ စစ်သားတွေအတွက် အသက်အန္တရယ်ရှိတာ သိလို့ တံခါးပေါက်တွေကို ဖွင့်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေက အရင်ဝင်သွားပါတယ်။ အပေါ်ရောက်တော့ စစ်သားတွေကို အရပ်ဝတ် ဝတ်ခိုင်းပြီး အဲဒီစစ်သားတွေကို ဘုန်းကြီးတွေက ကယ်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ စစ်သားတွေအသက်ဘေးက လွတ်သွားတာဟာ ဘုန်းကြီးတွေ ကျေးဇူးပါ။
နောက် တောင်ဥက္ကလာဖက်မှာ အဆိပ်ခတ်တဲ့သူတွေကို ဆန္ဒပြလူစုက ဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်။ ဆေးခပ်သူတွေကိုယ်တိုင်က ထောက်လှမ်းရေးက ဆေးထိုး ဆေးတိုက်ပြီး စေခိုုင်းခံထားရလို့
ကြောင်တောင်တောင်တွေ ဖြစ်နေတာပါ။ ဘာမှလည်းမေးမြန်းလို ့မရ။ ဒေါသမထိမ်းနိုင်လို့ လူတချို ့ကို သတ်တောင် သတ်ပြီးနေပါပြီ၊ အဲဒီသတင်းကို ငွေကြာရံကျောင်းတိုက်က ဆရာတော်ကြားလို့ ကားနဲ့ အလျင်အမြန်ရောက်လာပြီး အဆိပ်ခတ်တဲ့လူတွေရဲအသက်ကို အလှူခံခဲ့ပါတယ်။ လူဝတ်နဲ့နေရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိလို ့ဒကာတွေကို သင်္ကန်းဝတ်ပေး၊ ဒကာမတွေကို သီလရှင်ဝတ်ပေးပြီး ကျောင်းတိုက်မှာ စောင့်ရှောက်ထားခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ပါဝင်ခဲ့သူတွေကို မေးကြည့်ရင် သိနိုင်ပါသေးတယ်။
အစိုးရစက်ရုံတွေ မီးဘေးက ကင်းဝေးအောင် ကယ်တင်ခဲ့တာတွေနဲ့ အခြားအဖြစ်အပျက်များစွာလဲ ရှိပါသေးတယ်။ တကယ်တော့ ဘုန်းကြီးတွေရော လူထုကရော လိုချင်တာက တရားမျှတမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုပါ။ အဲလို ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သံဃာတွေကို စစ်အာဏာရှင်တွေက ဖမ်းဆီးပြီး အတင်းအဓမ္မ လူဝတ်လဲပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခဲ့တယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေပြောသလို အဲဒီသံဃာတွေဟာ ဘုန်းကြီးအယောင်ဆောင် သံဃာအတုတွေလား။ အဖမ်းခံရတဲ့သံဃာတွေကို သံဃနာယကဆရာတော်တွေက ဘာတွေ အကူအညီပေးခဲ့သလဲ။
(၂) ၁၉၉ဝ ခုနှစ်တုန်းကလည်း မန္တလေးသံဃဆွမ်းလောင်းပွဲမှာ စစ်တပ်ကကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဆွမ်းခံနေတဲ့ သံဃာတန်းထဲကို အကြမ်ဖက်ခဲ့တဲ့အတွက် ရဟန်းသာမဏေ (၁၅) ပါး ခန့် ထိခိုုက်ခဲ့ရတယ်။ (ပျံလွန်တော်မူခဲ့တယ်လိုု့ ဆိုုပါတယ်၊ စာရင်းစုံစမ်းဆဲ)။
စစ်တပ်ရဲ့တရားမဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သံဃာထုက မကျေနပ်လို့ မန္တလေးသံဃာထုက ဦးဆောင်ပြီး စစ်တပ်ရဲ့ သာရေး၊နာရေးကိစ္စတွေမှာ မပက်သက်ဖိုု့ဘို ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇကံ ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုကံဆောင်ခဲ့တာကလည်း ဘုရားဟောကြားထားတဲ့ ဝိနည်းတော်နဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။
အဲဒီလိုကံဆောင်မှုကြောင့် ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးက ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးအချို့ကို လူဝတ်လဲပြီး ထောင်ချခဲ့တာပါ။ ဒီလို အများလေးစားတဲ့ ထေရ်ကြီး ဝါကြီးဆရာတော်တွေကိုလည်း သံဃာအတုအယောင်တွေ၊ သင်္ကန်းဝတ်တွေဆိုပြီး စွပ်စွဲခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဆရာတော်ကြီးတွေ ထောင်ကထွက်တော့ အာဏာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ဘွဲ့တံဆိပ်တွေကပ်ပြီး ကျောင်းတွေဆောက်ပေး၊ ဆန် ဆီ ဆား ဆေးလှူနဲ့ ပြားပြားဝပ် ရှိခိုးနေကြပြန်တယ်။ အမြင်ကပ်လောက်အောင် သွားလာ ဝင်ထွက်နေကြတာပါ ။ ဘုန်းကြီးအတု၊အစစ်ဖြစ်တာ စစ်တပ်ကဆ ုံးဖြတ်ရမှာလား။ သံဃနာယက က ဆုံးဖြတ်ရမှာလား။
အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ပက်သက်လို့ သံဃနာယကဆရာတော်တွေ သံဃာထုဖက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့သလား။
(၃) ၂၀ဝရ စက်တာဘာအရေးအခင်း
(သံဃနာယကလက်စွဲ၊ အပိုင်း(၅)၊ အခန်း(၂၈)၊ (စ) မှာ …သို့ဖြစ်ပါ၍ သံဃာတော်များ တန်းစီလှည့်လည် လမ်းလျောက်၍လည်းကောင်း၊ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် လှည့်လည်၍လည်းကောင်း၊ ပရိတ်တော်ရွတ်ခြင်းသည် ဝိနည်းတော်နှင့် ဆန့်ကျင်မှု မရှိသည့်အပြင် မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှစ၍ ဆရာစဉ် ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ ညွှန်း = (ဒု၊ ၄ရ ပါး စုံညီ ဧကူနဝီသတိမ အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ ၂၅-၂၈။)
စက်တင်ဘာ (၅) ရက်နေ့က စခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တွေ ငြိမ်းချမ်းစွာမေတ္တာပို့ လမ်းလျောက်ချီတက်ပွဲမှာ သံဃာငယ်တပါးကို ဓာတ်တိုင်မှာ ကြိုးနဲ့တုပ်ပြီး ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တာက စလို့ ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေး စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ အရေးအခင်းကာလမှာ သံဃာ (၃၀၀၀) ကျော် အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ထင်ရှားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုကတော့ ငွေကြာရံကျောင်းတိုက်ပါ။ ငွေကြာရံကျောင်းတိုက်ကို ညအချိန်မတော် စစ်တပ်ကဝိုင်းပြီး ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးလို့ သံဃာတွေ သွေးမြေကျခဲ့တာ၊ ကျောင်းတွေ ဖျက်ဆီးခံရတာ၊ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာတွေဟာ ခုအချိန်ထိ မှတ်တမ်းတွေရှိနေသေးပါတယ်။ ငွေကြာရံကျောင်းဆိုုတာ ၈၈ အရေးတော်ပုုံတုုန်းက စစ်တပ်အလိုုတော်ရိတွေ၊ အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးရေးသမားတွေကိုု အသက်အလှူခံပြီး ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းဖြစ်တယ်ဆိုုတာ မမေ့သင့်ပါ။ ထိုု့အပြင် ကျောင်းတိုက်တွေ ချိတ်ပိတ်ခံရတာ ကျောင်းပေါင်း (၆၀) ကျော် ရှိပါတယ်။
ထောင်ထဲမှာ သံဃာတော် ၂၀ဝ ကျော်ကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချထားဆဲ ။ အဲဒီလို စစ်အာဏာရှင်တွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ သံဃာတော်တွေကို အတင်းအဓမ္မ ဖျက်ဆီး နှိပ်စက်နေတာတွေကို သံဃနာယကဆရာတော်တွေက တားဖူးပါသလား ။ သံဃာတော်တော်တွေ လွတ်မြောက်ဖို့ အာဏာရှင်တွေကို ဩဝါဒတွေ ပေးဖူးပါသလား။
စစ်အာဏာရှင်တွေက ပြည်သူလူထုကို ဗိုလ်ကျ စိုးမိုး အနိုင်ကျင့်နေတာတွေကို ပြည်သူလှူတဲ့၊ ပြည်သူ့ဆွမ်းကို စားနေတဲ့ သံဃာနာယကဆရာတော်တွေက ထိုင်ကြည့်နေမှာလား။
ကိုယ့်ဒကာ၊ ဒကာမတွေ ဆင်းရဲဒုက္ခက လွတ်မြောက်အောင် ကူညီတာ အပြစ်ရှိလား။
အဓမ္မဝါဒတွေ ထွန်းကားနေတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဓမ္မဝါဒတွေ ထွန်းကားအောင်လုပ်ဖို့က ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ တာဝန်မဟုတ်ဘူးလား။ သံဃာတွေကို နှိပ်ကွပ်ဖိုု့ စစ်တပ်က အမိန့်တွေ ထုတ်ခိုင်းတိုင်း လက်မှတ်ထိုးပြီး ထုတ်ပြန်နေမှာလား။
မြတ်စွာဘုရားက လောကလူသားတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ဖိုု့ ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသား၊ အမျိုးအဆွေမျိုးတွေရဲ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ဖို့ မိန့်မှာတော်မူခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးလား။
အဲဒီလို ပြည်သူဘက်ကရပ်တည်တဲ့ အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဘာတခုမျှအကူအညီမပေးခဲ့တာကြောင့် ရဟန်းရှင်လူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ သံဃမဟာနာယကဆိုတာ စစ်တပ်လက်ကိုင်တုတ် ရုပ်သေးသံဃာ့အဖွဲ့အစည်း၊ သံဃာထုကို ကိုယ်စားမပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလို့ ယုံကြည်နေတာကတော့ ဘာမှအံ့ဩစရာ အထူးအဆန်း မဟုတ်တော့ပါ။ ။
ဆုံးဖြတ်ရမည့် (အမှု) သဘောကို နိုင်ထက်စီးနင်း အလျင်စလိုဆုံးဖြတ်ခြင်းကြောင့် တရားတော်အတိုင်းတည်သူ တရားသူကြီးမဟုတ်ပေ။ ပညာရှိသည် ဟုတ်မှန်သောအကြောင်း၊ မဟုတ်မှန်သောအကြောင်း နှစ်ပါးလုံးကို (စူးစမ်း မေးမြန်း၍) ဆုံးဖြတ်ရာ၏။ ။ (ဓမ္မပဒ)
သင့်မှာ ငွေ တစ်ထောင်ရှိတာနဲ့.. ငွေ တစ်သိန်း ရှိတာ ဘယ်ဟာ ကောင်းပါလိမ့်…..
ငွေ တစ်သိန်း ရှိတာ သာပြီး ကောင်းမှာပါ…
အဲဒီတော့ သင့်မှာ ရှိသော ငွေ ပျောက်ပျက်သွားတယ် ဆိုရင်.. ဘယ်ဟာက ပိုဆိုးမှာပါလိမ့်…
ငွေ တစ်သိန်း ပျောက်သွားသူက ပိုဆိုးမှာပါ..
ရတနာ သုံးပါး ရှိတာဟာ.. သာပြီး ကောင်းပါတယ်..
အဲ… ရတနာ သုံးပါးကို ပျောက်ဆုံးသွားတာက သာပြီး ဆိုးပါတယ်…
သစ္စာတရား ရှိနေတာဟာ.. ဘာနဲ့မှ လဲလို့ မရနိုင်တဲ့ ရတနာပါ..
ခုတော့ အဲဒီ သစ္စာတရားတွေ ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်….
သာမန်လူတစ်ယောက်ကို ရိုင်းပျမိတာနဲ့…. လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ကို ရိုင်းပျမိတာ.. အပြစ်ဒဏ်ခံရတာခြင်း မတူနိုင်ပါဘူး..
ဘုရားစေတီတွေပေါ်တက်…. ပွဲဈေးတွေလုပ်… စားကြသောက်ကြ.. ပြီးတော့ ပါကြ.. ပေါက်ကြ…
ဘုရားပွဲဟေ့ ဆို အရက်ချက်စက်ရုံကြီး အဲဒီနား ရောက်လာသလိုပဲ.. သောက်ကြတယ်.. မူးကြတယ်..
ဒါ စော်ကားတာပဲ… ဒါ သူတော်ကောင်းတွေကို ပြစ်မှားတာပဲ…
လောဘတွေ နည်းရမယ်.. ဒေါသတွေ နည်းရမယ်.. မောဟတွေ နည်းနိုင်သမျှ နည်းရမယ်လို့….
လောဘ ဒေါသ မောဟတွေ လျှံတက် နေတဲ့ စိတ်တွေနဲ့.. ပြောကြတယ်..ဆိုကြတယ်..
ဒါ သစ္စာတရားကို လိမ်ပြောတာ…. သစ္စာတရားကို လိမ်ပြောတာဟာ… သစ္စာ မရှိတာ… သစ္စာမဲ့တာ…
ဒါကြောင့်…. အဲဒီ အကြောင်းတရားတွေကြောင့်….
မြန်မာပြည် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးရပါတယ်လို့ ထင်မိ.. မြင်မိပါကြောင်းဗျာ…..
လူအများနဲ ့သက်ဆိုင်တဲ ့ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းကြတဲ ့အခါမှာ ဖြစ်တတ်ကြတဲ ့၊ အဖြစ်များတဲ ့လွှဲမှား မှုမျိုး က တော့ who made the problem? ဆိုတဲ့ လူအပေါ်မှာပဲ အာရုံထားတတ်တာမျိုးပါ။ What is the problem? How should we solve it? ဆိုပြီးငြိနှိုင်းကြတာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်တယ်လို ့ယူဆမိပါတယ်…..
မာသာထရီဇာဟာ ကမ်ဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလေ့မရှိပါဘူး။ တကယ့်ကို အရေးကြီးတာက လူတစ်ယောက်ချင်းငြိမ်းချမ်းကြဖို ့ကသာ ပဓာန ကျတယ်လို ့ခံယူ ထားလို ပါပဲ။လူတစ်ဦးကို တစ်ဦးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစေတာ၊ ဗိုလ်ကျ စိုးမိုး အနိုင်ကျင့်နေတာ တွေဟာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ဖုံးလွှမ်းနေကြလို ့ပါ။ ဒါ ့ကြောင် ့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီအလိုက် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ ရှေ ့တန်းမတင်ကြပဲ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကို ဖော်ဆောင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက် ပါရစေ……..